Soo Laabashada Champions League… 4 Sababood Oo Barcelona Ka Hor Istaagi Kara Ku Guulaysiga Tartanka Sanadkan - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Soo Laabashada Champions League… 4 Sababood Oo Barcelona Ka Hor Istaagi Kara Ku Guulaysiga Tartanka Sanadkan
Kooxda Barcelona ayaa bilaaban doonta tartanka champions League oo ay mar kale isku dayi doonaan in ay ku guulaystaan tartanka champions League markii 6-aad ee taariikhdooda.
Kooxda Barcelona ayaa laga sugayaa koobka champions League tan ilaa sanadkii 2015 iyada oo aanay Barcelona muddo dheer ku guulaysan tartan muddo 5 sano ah.
Kooxda Barcelona ayaa laba jeer ku hadhay tartanka sanadihii ugu dambeeyay inkasta oo ay lugtii 1-aad guulo ka gaadhay kooxaha Roma iyo Liveprool.
Barcelona ayaa sidoo kale xoojisay kooxdiisa xagaagan waxana ay ka go,antahay in ay u dagaalanto tartanka ugu magaca weyn taariikhda kooxaha.
Si kasta ha ahaatee waxa jirta 4 sababood oo ayna Barcelona ugu guulaysan doonin tartan ama ayna ugu sharaxnayn ku guulaysiga tartanka champions League xilli ciyaareedkan.
Waa Maxay Sababta uu Ernesto Valverde wali u yahay tababaraha Barcelona? Waa su,aasha ay is waydiinayaan taageerayaasha Kooxda Barcelona si kasta ha ahaatee tababaraha ayaa wali haysta kalsoonida maamulka kooxda Barcelona.
Barcelona ayaa sumcad xumo ku samaysatay qaabkii ay uga hadhay tartanka champions league kadib labadii sano ee ugu dambeeyay ee ay tartanka uga hadhay sida foosha xun inkasta oo ay guul gaadheen lugtii hore ee tartanka waxana iska cad in uuna lahayn tayo iyo waliba khibrad Barcelona ku hogaamin kara koobka ay muddada dheer sugayeen.
2.Ku Tiirsanaanta Weyn ee Lionel Messi:
Dhibaatadan ayaa jirta muddo dheer waxana laga yaabaa in ay tahay sababta ay Barcelona sida aadka ah isugu dayday in ay la soo saxiixato xiddiga kooxda PSG ee Neymar.
Kooxda Barcelona ayaa ilaa haatan 4 kulan ciyaartay la,aanta Lionel Messi waxana cad in ay Barcelona ku adagtahay noloshu la,aanta kabtankooda reer Argentine.
3.Daafac Aad u Jilicsan:
Dhibaatada kooxda Barcelona ee champions League sanadihii ugu dambeeyay ayay sabab u tahay diciifnimada daafaca kooxda Barcelona iyada oo ay tusaale u tahay guuldarooyinkii Liverpool, Roma iyo waliba PSG Kuwaas oo dhamaantood goolal kaga dhaliyay Barcelona kulamo ka baxsan garoonka Camp Nou.
4.Kooxaha Premier League:
Waxa mar kale Barcelona laga hor istaagi karaa Ku guulaysiga champions League sabab la xidhiidha tartanka oo xoogaysanaya waliba door weyn ka yihiin kooxaha Premier League oo sanadkii hore wacdaro ka dhigay waliba 2 kooxood isaga hor yimaadeen Finalka tartanka.